Native Microsoft Office yeLinux: Ichokwadi muna 2014? | Linux Vakapindwa muropa
Wese munhu anoziva chirongwa chekugadzira iyo hofisi yeHofisi yeApple uye mamwe mapurojekiti anonakidza ayo achiri makuhwa, iyo mushure mezvose iri Linux-based operating system. Asi Microsoft inogona kuenda mberi nekugadzira vhezheni yeMS Hofisi yeLinux. Tiri kutaura nezvekugona kuisa Hofisi natively pane chero kugoverwa kweLinux, pasina kudikanwa kweWine, PlayOnLinux kana chero emulator kana kugadzirisa Windows yayo ...
Si Microsoft tanga kuburitsa software yako yeLinux, ingadai iri nhau dzinokatyamadza zvekuti dzinobata vese vashandisi veLinux. Izvi zvaizoreva kuzivikanwa kuzere kwehukuru hweLinux neMicrosoft uye pamwe nekuzvuva mamwe makambani kuti aite zvimwe chete. Ndiani anoziva kana rimwe zuva isu tichaona zvirongwa senge Photoshop yeLinux.
Kuti makambani emavhidhiyo emitambo ave kutotaridzika zvakanaka paLinux haisi tsaona, uye makambani makuru esoftware anogona kutanga kuita zvakafanana. Runyerekupe nezve Hofisi yeLinux yakapararira muBrussels (Belgium), kumusangano weEuropean open source (FOSDEM). Ikoko Michael Larabel akataura nezvekuonekwa kweHofisi yeLinux mu2014.
Una yemuno vhezheni yeOffice yeLinux zvingave zvakanaka kune vese avo vanovimba neiyi hofisi suite uye kuti izvi zvinovasungira kuWindows. Zvino ivo havachave nechavo chikonzero chekumira kushandisa Microsoft's operating system. Asi ... Microsoft inoda kuita izvi? Chokwadi ndechekuti Microsoft ingatotengesa amai vayo kana izvi zvichiunza mari kukambani.
Mubvunzo wekuziva kana pachave neiyo Hofisi vhezheni yeLinux kana kwete yakavakirwa pane iyo chigadzirwa purofitiDai zvaive zvinobatsira, usakahadzika kuti zvichave zvakadaro. Chokwadi ndechekuti kune vatove vashandisi vazhinji vanoshandisa Linux, asi kuchine mamwe makambani uye makambani makuru anoishandisa uye angafara kuve nechigadzirwa senge MS Office inomhanya natively pane yavo Linux masisitimu.
Kutendeseka angave akanaka mashoko, zvinosuwisa zviri zviviri LibreOffice, seOpenOffice Ivo havasati vasvika padanho rekukura kweMS Office uye zvinofanirwa kubvumwa kuti Microsoft suite ndechimwe chezvakanakisa zvigadzirwa. Zvimwe zvezvisarudzo nemidziyo yeHofisi hazviwanikwe mune dzimwe nzira dzeLinux uye munhu wese anoziva zvinoitika pakuvhura gwaro reHofisi muLibreOffice kana OpenOffice, haina kunyatsogadziriswa (kunyangwe iri shoma uye zvishoma ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft Office yeLinux: inogona kunge yave pedyo
Ini handisi kunyatsonzwisisa chinyorwa ichi, kana zvarinotaura hazvina hukama nemusoro wenyaya. Pane here chero nhau kuti Microsoft Office yeLinux inogona kunge iri yechokwadi munguva pfupi, kana iri pfungwa yekufungidzira zvingatungamira Microsoft kuti itore danho rekutanga chigadzirwa?
Kune rimwe divi, ini handifunge kuti irisarudzo yekuita purofiti. Dzimwe nguva kambani inochengetedza chigadzirwa nekuda kwekuti inosimbisa imwe. Ini ndinofunga kuti kugadzira Hofisi yeLinux, kunyangwe kana ichibatsira pakutengesa kwechigadzirwa icho, Microsoft inogona kushomeka zvakanyanya ecosystem, ichikuvadza zvimwe zvigadzirwa uye kubatsira Linux nedzimwe nzira, izvo zvinogona kutoita kuti varasikirwe nemari uye musika.
Mhoro. Ehe izvo zvinogona kushayisa simba zvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft, kunyanya kutsamira paWindows, asi isu takaona Microsoft ichiita zvinhu zvisingatarisirwe uye zvisingafungidzike kwemadhora mashoma uye zvadaro zvikonzeresa zvakakomba kambani. Asi vanoita sevano famba nezvishuwo zvekuda chinzvimbo kupfuura kufunga uye kufunga ... Saka hazvingave zvakashamisa.
Kana zviri zvemusoro wenyaya, zvinoreva kuti runyerekupe asi runogona kuzivikanwa nekukurumidza, pamwe gore rese iri.
Kwazisai uye ndine urombo kuti chinyorwa chakushamisa iwe.
Uye runyerekupe rwunobva kupi?
Mhoro. Runyerekupe rwakapararira paInternet uye tarisiro kwayakatangira yaive muFOSDEM uye chikonzero chiri Michael Larabel (muvambi wePhoronix).
Pachezvangu, kushandiswa kweLinux kuchasimbiswa blablabla… .asi chii chichaitika kune iyo yese Libre / Openoffice nharaunda?
Hapana ... aya masuti anowanikwawo paWindows uye anowirirana neMS Office. Uye izvo? Idzi ndidzo dzimwe nzira dzinogona kuve nemukwikwidzi mumwe chete, yega yega inosarudza yavanoda. Iko kukwikwidza kuri nani kune vashandisi.
kubvuma hukuru hwelinux? LOL. usandiseka, shamwari unopenga. Kana Windows ichizviita, imhaka yekuti pane zvinongodiwa kubva kune vashandisi, seni, ndiani angazvitengere yangu Linux Ubuntu 14.
kutaura chokwadi handidi mahara linux suites uye ndinoshandisa Microsoft office kubva pawaini futi, saka kwegore nehafu ndakasarudza yechitatu sarudzo: wps office
Pindura kune adel
Ndave linuxer kwenguva yakareba, handidi windows, asi chimwe chinhu chandinoziva, emahofisi masutu anoyamwa ... ivo vanoyamwa zvakanyanya ... uye chaizvo kana windows vachigona kuwana linux vhezheni, asi zviri pachena chichava chinhu chebhinari chinokumbira serial, saka zviri pachena kuti Microsoft inoda kutora mukana kune avo vashandisi vasingabhadhari windows asi vanozoita kuti vabhadhare hofisi yavo suite sezvo ivo pachavo vachiziva kuti isu tinoshaya hofisi yakanaka suite isu linuxers ...
PS: Ini pachangu, ini ndinoshandisa iyo google hofisi sutu :)
Pindura kuna 7i11h4x0r
Shandisa WPS hofisi ndicho chinhu chakatsiga muLinux sehofisi otomatiki, ingangoita iri dombo reMS Office.
Mx0023 (@ mx0023) akadaro
Mubvunzo wemamirioni emadhora, ndiani achabhadhara kuti ave neMS Office paLinux? Vazhinji vashandisi veWindows zvirokwazvo vane hofisi yakatsemuka, ndinozviona zvakaoma kwazvo kumushandisi weLinux akajaira kuve nemahara uye epachena mahara kubhadhara kubhadhara kuve nehofisi yakawanda.
Pindura kuna mx0023 (@ mx0023)
Libreoffice haisi 100% inoenderana neMS Office, gwaro rinovhara nemalogo kufamba uye rinotaridzika zvinotyisa, kunze kweCalc ine mazita emashizha akasiyana muhukuru hweflea. LibreOffice ndeye tsvina, marara anokuvadza chero munhu weziso. Kana munhu akatama kubva paWindows achienda kuLinux ndiyo yekutanga (uye inoparadza zvakanyanya). Ini ndakamboda kurima chifananidzo chakanamirwa kubva mubrowser muRunyori, handina kumbowana icon, ndakazopedzisira ndave nezvivindi, iko kushomeka kwakazara kwekuona uye kushandisa njere. Zvirokwazvo vanhu vanoshandisa LibreOffice uye vanozvidzivirira kurufu kuti zviri nani kupfuura MSOffice vanopfeka zvakashata uye vanoenda vasina kunyatso tarisa vasina hanya nechitarisiko chavo. Asi ichokwadiwo kuti vanhu vanoshanda kuLibreOffice vanozvipira, vazhinji vacho nerudo rwehembe. Uye kunouya yekutanga dambudziko rehurongwa hweLinux: vatadza kuita kuti ibatsire. Yakavhurwa sosi hazvireve mahara, zvinhu zvinodhura kana ndeyekuti ivo programmers vanopihwa zvinhu sezvipo. Vangani vedu vangave vachida kubhadhara LibreOffice mukutsinhana ne100% MSOffice-inoenderana Hofisi ine yakavandudzwa uye ine hushamwari interface? Kana isu takamirira iyo MSOffice ye linux, kuti tiibhadhare (nekuti hatizokwanise kushandisa mutswe) ndinofunga tave kuzowa. Uku kwaingova guhwa chete. Isu tiri 2015 uye hapana zviratidzo zvemurevi wenhema izvi kana yeiyo yekuzvarwa Linux Hofisi. Kune yangu chikamu ini ndiri kushandisa WPS Hofisi uye ini ndinongotarisira kuti yakagadzikana vhezheni yakashandurwa zvakakwana kuti ibude kuitenga, kunyangwe ichishaya maererano nemashandisirwo, ndiyo inoenderana kwazvo neMSOffice (iyo munhu wese anoshandisa muhofisi yangu) uye rakanaka mukuona.
walter cahun cen akadaro
Zvakanaka, isu tatova muna 2016 uye hapana .. .. (Ndine chokwadi kuti hazvizombofi zvakaitika: '(:' (: '(:' (
Pindura kuna walter cahun cen
edza wps ...
Pindura kuna jc
Jose Orrego Mir akadaro
Ini ndashanda neLibreoffice, ndinoishandisa kakawanda uye handina kumbove nezvinetso zvemhando ipi neipi, kunze kwekunge yandikumbira kuti ndichengete gwaro, ndinozviita muWindows Office nekuda kwechimwe chinhu chakakosha. mune yakasimbiswa mhando Fedex Hofisi iyo michina Iyo yakagadzirirwa Windows Office uye ini handidi kuziva iyo faira rakachengetwa muLibreOffice. Uye zvakare, ivo vanogadzira LiberOffice pamwe neWPS uye ese akavhurwa sosi mapurogiramu anokodzera ruremekedzo rwangu rwese, nekuti nekuda kwavo, avo vanozvipira, vanoita napose pavanogona napo kuti isu vashandisiwo zvavo tigone kuishandisa zvakasununguka. Zvirinani zvishoma zvekutenda kune avo vanhu zvaisazokuvadza kubva kwatiri, haufunge?
Pindura José Orrego Mir